सेयरबाटै संसार जितेका वारेन बफेटले कसरी लगानी गर्छन् , आखिर के छ त्यस्तो जादु ? – OnlinePahar
अन्तराष्ट्रिय विचार विजनेश समाचार
सेयरबाटै संसार जितेका वारेन बफेटले कसरी लगानी गर्छन् , आखिर के छ त्यस्तो जादु ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:३३ Basanta Khanal	0 Comments	share market
काठमाडौं : बर्कसायर हाथवेका संस्थापक वारेन बफेटलाई अनुसरण गर्ने लगानीकर्ताको जमात विश्वभर ठूलै छ । बफेटले कसरी लगानी गर्छन् भन्ने सबैको चासोको विषय हुने गर्दछ । वारेन बफेटलाई ‘भ्यालू इन्भेष्टर’ रुपमा चिनिन्छ । यस्ता लगानीकर्ता वित्तीय सूचक मजबुत भएका र दीर्घकालमा राम्रो सम्भावना बोकेका कम्पनीको मात्र सेयर किन्ने गर्छन् । सबल कम्पनीमा लामो समय होल्ड गरेर त्यसबाट मनग्ये लाभ लिन्छन् । लगानीको यो तरिका लामो समयसम्म सेयर होल्ड गर्न चाहनेका लागि उत्तम हुने गर्छ ।बफेटले लगानी गर्दा कम्पनीको व्यापार, व्यवस्थापन पक्ष, वित्तीय व्यवस्था, मूल्य र यससँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई ध्यान दिने गरेका छन् । जसले गर्दा नै बफेटलाई सफल लगानीकर्ता र विश्वकै धनी व्यक्तिहरुको सूचीमा पुर्याएको हो । बफेटसँग आखिर के छ त्यस्तो लगानी जादु ? सेयरबाटै संसार जित्दै गरेका बफेटको यस्तो प्रमुख लगानी मन्त्र :
बफेट जहिले पनि आफूले राम्रोसँग अध्ययन गरेको, नजिकबाट बुझेको अनि सुक्षम विश्लेषण गर्न सक्ने कम्पनीमा मात्र लगानी गर्छन् । कुनै पनि कम्पनीको व्यापार कस्तो छ ? कम्पनीको वार्षिक वृद्धिदर कति हुने गरेको छ अनि भावी सम्भावना के छ ? भनेर थाहा पाएपछि मात्र त्यस्ता कम्पनीको सेयरमा उनी हात हाल्छन् । बफेट सबैभन्दा पहिला बजार, अर्थ व्यवस्था वा लगानीकर्ताको मनसाय विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि व्यापारलाई विश्लेषण गर्न सुझाव दिन्छन् । दोस्रोमा त्यो व्यापार सञ्चालनको इतिहास हेर्नुपर्छ र अन्त्यमा तथ्यांकको प्रयोग गरी सम्बद्ध व्यापार व्यवसायले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्छ वा दिँदैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने बफेटको भनाई छ ।
बफेटले आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षलाई निकै महत्व दिने गरेका छन् । व्यवस्थापन पक्ष सेयरधनीप्रति कति उत्तरदायी छ ? सेयरधनीलाई उचित लाभांश दिन व्यवस्थापन सफल छ कि छैन ? यस्ता कुराहरुमा विशेष ध्यान दिन बफेट सुझाव दिन्छन् । कतिपय अनुसन्धानले व्यवस्थापन पक्षले नाफा कमाए पनि लाभांश वितरणमा कन्जुस्याईं गर्ने गरेको पनि देखाएको छ । सेयरधनीप्रति उत्तरदायी नहुने यस्ता कम्पनीमा लगानी नगर्नु नै राम्रो हुने बफेट बताउँछन् । त्यसैले बफेट लाभांशको रुपमा उचित प्रतिफल दिने र लगानीकर्ताप्रति बफादार हुने र झुट नबोल्ने कम्पनीमा मात्र लगानी गर्न सुझाउँछन् ।
मूल्य : बफेट एक भ्यालू इन्भेष्टर हुन् । बफेट जहिले पनि कम्पनीको वास्तविक मूल्य कति हुन सक्छ भनेर अनुमान लगाउने गर्छन् । बफेटले मार्केटले कम मूल्यांकन गरेका कम्पनीको सेयर किन्ने गर्छन् । उनले यस्ता कम्पनीले भविष्यमा कति प्रतिफल दिन्छन् वा दिन सक्छ भनेर अन्दाज पनि लगाउने गर्छन् । बजारमा कम मूल्यांकन गरिएका सेयर महत्वपूर्ण हुन्छन् तर प्रायः लगानीकर्ताले यसमा ध्यान दिएका हुँदैनन् । यसरी कम मूल्यांकन गरिएका तर राम्रो प्रतिफल दिने सेयर खोज्ने एउटा तरिका भनेको कम्पनीको वित्तीय सूचकलाई गहन अध्ययन गर्नु नै हो । बफेट सफल लगानीकर्ता बन्नुमा उनको कम्पनी छनोट गर्ने तरिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रायः लगानीकर्तालाई कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने अन्योलता रहेको देखिन्छ । आफ्नो लगानी नराम्रो कम्पनीमा परेमा लगानी डुब्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ ।
कम्पनीले कस्तो प्रगति गर्दै आएको छ ? :छोटो समयका लागि राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनी भन्दा धेरै वर्षसम्म नियमित रुपले राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीमा लगानी गर्ने । त्यसैले धेरै वर्षसम्म राम्रो इक्विटीमा प्रतिफल दिने कम्पनी चुन्ने ।
कम्पनीको ऋण कति छ ?: कुनैपनि कम्पनीको ऋण धेरै छ भने त्यसले पनि फाइदा गर्दैन । त्यस्तो कम्पनीको आम्दानी सबै ऋण तिर्नमा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनी ऋण लिएर मात्र प्रगति गरिरहेको छ भने त्यस्तो कम्पनी लगानी योग्य हुँदैन ।
प्रोफिट मार्जिन कस्तो छ ? : बफेट प्रोफिट मार्जिन राम्रो भएको कम्पनी रोज्ने गर्छन् । अझ भन्नुपर्दा प्रोफिट मार्जिन बढ्दै जाने कम्पनीमा विशेष ध्यान दिने गरेका छन् । इक्विटी प्रतिफलमा जस्तै प्रोफिट मार्जिन पनि धरै वर्ष नियमित रुपले राम्रो भएका कम्पनीलाई रोज्न सुझाव दिन्छन् ।
← ओलीले बोलाए एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आकस्मिक बैठक, सांसदमाथिको कारबाही अघि बढ्ला?
फेरि आयो ‘नेप्से वाच’को नयाँ अंक, यसपटक पनि तपाईंले पढ्न पाउनुहुनेछ निःशुल्क ( हेर्नुहोस् ) →
मैलुङ खोला जलविद्युतको आइपिओ बाँडफाँट : भाग्यमानी ६ जनाले पाए ११ कित्ता, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:५० Basanta Khanal	0